Tijaabinta Bogagga Degitaanka - Naqshadeynta Naqshadeynta
Naqshad sameynta bogga Soo Degitaanka ee Imtixaanka
Khamiista, Sebtember 6, 2012 Khamiista, Sebtember 6, 2012 Douglas Karr
Mid ka mid ah sawir-gacmeedka ugu caansan ee aan aragnay waxaa sii daayay kafaala-qaadayaasheena tiknoolajiyadda,Qalabaynta , loo yaqaan Degista Boggan Dhaqdhaqaaqa ugu Fiican.Qalabaynta waa mid si fudud oo fudud loo isticmaali karo dhismaha foomka internetka iyada oo awood u leh inay dhab ahaantii ku dhisto bogag degitaan isla xal ah.
Qaab-dhismeedka loogu talagalay Degsi Dhamaystiran oo Degitaan Degdeg ah: Bogagga degitaanku waxay ka kooban yihiin koox xubno la qeexi karo. Qalabka dhismaha ee hoos lagu soo bandhigay waxaa loo isticmaali karaa hage ahaan markaad qeexayso oo aad abuurayso bog degitaan oo aad iska leedahay!
Dadka waawayn ee ku jira KISSmetrics waxay ku kala baxeen bogga soo degitaanka ee muuqaalkan quruxda badan, iyagoo ku siinaya burburka aagagga ay tahay inaad ku tijaabiso.
Tags: imtixaanka abpage degteydejinta bogga naqshadaImtixaanka bogga soo degayatijaabinta noocyo badan
Verge wuxuu isku darayaa ganacsiga iyo daabacaadda dhijitaalka ah
Sep 6, 2012 at 12: 28 PM
Waad ku mahadsantahay wadaagida macluumaad wanaagsan! Waxaan jecelahay inaan arko qoraalada oo jabaya waxyaabo si loo tijaabiyo loona fududeeyo suuqleyda inay sifiican usameeyaan.